Itoobiya Archives - Sawirrotv
Tag Archive for: 'Itoobiya'
Saaka ayaa lagu waddaa in magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya, uu ka furmo Shir Madaxeedka Caadiga ah ee ururka Midowga Afrika, iyadoona Shirkaasi uu ka qayb galayo Madaxweynaha Soomaaliya oo hadda ku sugan caasimadda dalkaasi. Shirkan oo ah kii 30-aad ee Madaxda Afrika isugu yimaaddaan ayaa socon doona muddo laba maalmood ah, waxaana …
Madaxweynaha maamulka Soomaalida deegaanka Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar (Cabdi Ilay) ayaa Wareysi uu bixiyay waxa uu kaga hadlay Xiisada siyaasadeed ee ka dhalatay Sargaalka katirsanaa Jabhadda ONLF ee lagu Wareejiyay dowlada dalka Itoobiya. Waxa kale oo uu Madaxweynaha dowlada Deegaanka Soomaalida Itoobiya sheegay in C/kariin Sheekh Muuse (Qalbi Dhagax) uu yahay muwaadin kasoo jeeda Deegaanka …
Madaxweyne Farmaajo oo Maanta Gaaray Magaalada Adiss Abeba ee Dalka Itoobiya (SAWIRRO)
Madaxweynaha Dowladda Federalka ee Soomaaliya mudane, Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa gelinkii dambe ee maanta ka degay Garoonka diyaarada ee magaalada Addis Abeba. Madaxweynaha iyo Wafdigiisa ayaa waxaa Garoonka si diiran ugu soo dhaweeyey Ra’isul-wasaaraha Ethiopia dalka Itoobiya Haile Mariam Desalegn, Wasiiro iyo Madaxweynaha dowlad Deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo qaar ka mid ah Jaalliyadda Soomaaliyeed ee …
General Gabre oo ka Xanaaq Jawaabtii Farmaajo, Bartiisa Twitter-kana ku Muujiyay Caradiisa (Akhriso)
Gabre oo ah Sarkaal ka tirsan sirdoonka dowladda Itoobiya, ayaa eedeyn u jeediyay Madaxweynaha Soomaaliya mudane, Maxamed C/laahi Maxamed Farmaajo. General Gabre ayaa Bartiisa Twiter-ka uu ku leeyahay wuxuu ku soo qoray hadalo eedeyn ah oo Madaxweynaha uu ujeediyay, wuxuuna sheegay Madaxweynaha uu xushmeyn waayay ciidamada Itoobiya ee Amisom ka tirsan kuwaas oo ku sugan …
March 09, 2017 – Madaxweynaha dalka Itoobiya ayaa maalintii shalay ahayd danjire cusub u soo magacowday dalka Soomaaliya, kadib markii uu waqtigiisa dhamaaday danjirihii hore ee dowladda Itoobiya u fadhiyay Magaalada Muqdisho. Danjiraha cusub ee Dowladda Itoobiya ay u soo magacaawday dalka Soomaaliya ayaa waxaa lagu magacaabaa Jamaaludiin Mustafa Cumar, isagoo horey u ahaa ku …
February 21, 2017 – Ra’iisul wasarihii Hore ee dalka Itobiya Malez Zenawi ayaa wuxuu Burburkii dowladii dhexe ee Soomaaliya kadib dajiyay qorsho la’isugu diri karo shucuubta Soomaaliyeed, isla markaana wuxuu dajiyay nidaamkii uu kula wareegi lahaa dalka Soomaaliya. Melez Zenawi oo mudo dheer ku noolaa gudaha dalka Soomaaliya ayaa aqoon durugsan u lehaa xurgufta ka …
Guul Daradii Gen. Gabre ka soo Raacday Doorashadii Madaxweyne Farmaajo, oo Warbaahinta Caalamka ay ka Hadshay (VIDEO)
February 10, 2017 – Generaal Gabre oo ah Generaal u shaqeeya kana tirsan ciidamada sirdoonka ee dalka Itoobiya, ayaa waxa ay guul daro xun ka raacday xaruntii lagu qabanayay doorashada Madaxweynaha Soomaaliya. Gen. Gabre oo goobjoog ka ahaa xarunta ay doorashada ka dhacaysay ayaa xaruntaasi isaga baxay, kadib markii madaxweyne Farmaajo uu helay codadka xildhibaano …